Dhusomareeb oo looga tashanayo maamulka Galmudug |
Dhusomareeb oo looga tashanayo maamulka Galmudug
buy Brand Viagra, zithromax without prescription. DHUUSAMAREEBGuddiga farsamo ee maamul u sameynta gobollada Mudug iyo Galguduud ayaa wada wada tashiyo loogu diyaar garoobayo sidii loo furi lahaa shirka lagu dhisayo maamulkaasi.
Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah guddigaan ayadoo kulamo uu la leeyahay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Xildhibaan Mahad salad, Xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Galguduud.
Guddigaan ayaa horay ula soo kulmay maamulka Ximan iyo Xeeb ee magaalada Cadaado iyo qeybaha bulshada ee ku sugan magaalooyinka gobolka Galguduud.
Dowladda Soomaaliya ayaa guddi u saartay fududeynta maamul ay yeeshaan gobollada Mudug iyo Galguduud, ayagoo wada tashiyo iyo dowr dib u heshiisiineed u fududeynaya qeybaha bulshada iyo maamullada gobolladaasi.